Huawei ebigharịrị mmalite nke Mate X | Androidsis
Enwere asịrị na Huawei eyigharịrị mwepụta nke ekwentị foldable Mate X ruo Septemba, mana ndị ọkachamara ekpughere na nke a abụghị eziokwu.
Asịrị gbasara yigharịrị nke Mate X nwere ike ibilite n'ihi nsogbu dị na ya Samsung Galaxy Fold, enwere ike bụrụ ụzọ iji nwalee ngwaọrụ ahụ tupu ebido ya. Ka o sina dị, ndị ọkachamara ekpughere na Huawei ga -arapara na nhazi mmalite ya.
Mate X bụ ekwentị mkpanaka mbụ Huawei nke a ga-ama ọkwa na mmemme MWC 2019 na Barcelona. Ngwa a, n'adịghị ka onye na -ama ya aka, Galaxy Fold, na -apịa apịkọ kama ime n'ime. Na mbido, Huawei, nke katọrọ imewe mkpanaka South Korea, kwuru ọdụ ụgbọ ahụ ga -adị maka ịzụta n'etiti afọ.
Samsung Galaxy Fold na Huawei Mate X
Na mbido ọnwa a, Edepụtara mkpanaka ahụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị yana ndepụta kpughere nke ahụ ga -adị na june. N'aka nke ọzọ, Samsung ezipụla ngalaba nyocha nke atụmanya ya na YouTubers na blọọgụ teknụzụ. Agbanyeghị, naanị otu ụbọchị ka ejiri ya, enwere akụkọ gbasara enyo mebiri emebi.
Mate X nwere nnukwu ihuenyo diagonal 8-inch nwere mkpebi FullHD + nke 2,480 x 2,200. Ọ na-apịachi n'ime ekwentị nwere ihuenyo 6.6-inch n'otu akụkụ yana ihuenyo 6.38-inch n'akụkụ nke ọzọ. Ọ bụ site na Kirin 980, nke ejikọtara ya na 8GB Ram na 512GB nke ohere nchekwa agbasawanye.
N'ihi atụmatụ ya, igwefoto n'azụ ugboro atọ nke Mate X (40 MP + 16 MP + 8 MP) na -arụkwa ọrụ dị ka igwefoto n'ihu ya. Ngwaọrụ nwere Modem Balong 5000 n'ime, nke pụtara na na -akwado netwọkụ 5G. Ọ gụnyekwara batrị ikike 4,500 mAh yana nkwado maka teknụzụ chaja ngwa ngwa 55 W.
Huawei wepụtara a mkpado ọnụahịa nke euro 2,299 (~ $ 2,607 odika) na Mate X. Ọ ga -abụ n'ụlọ ahịa n'oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mba, Huawei etinyebeghị mbido nke Mate X